Semalt inopa 5 Zvinyorwa zveMifananidzo Zvimwe Zvokushandisa
Chigadzirwa chechifananidzo chinobatsira kubudisa mazita emifananidzo yakawanikwa pawebsite yakasarudzwa. Iwe unogona kushandisa shandura iyi kubvisa mifananidzo uye kuitumira iyo kuJSON format. Ichi chishandiso chinoshandiswa-user-friendly interface uye iri nyore kushandisa. Iwe unotofanira kupinda URL yewebsite iwe waunoda kuongorora nekurova bhoti "Tumira". Icho chinyorwa chekutsvaira chimbo chinobva chatora zvinyorwa zvino uye chinokuwana zvaunoda. Zvimwe zvezvinyorwa zvayo zvekare zvakataurwa pasi apa - polling software.
ExtractPDF inobatsira kunyora mapepa ePDF uye ichivadzora muzvikamu zvakasiyana: mifananidzo, zvinyorwa, mafonti, uye metadata. Iwe unogona kutora mawebsite akawanda sezvaunoda kunze kwekukanganisa pahutano. Iwe unongotanga kuisa URL uye rega ExtractPDF iparadze data yayo
Konwerter chimwe chikwata chikuru chechifananidzo chinokanganisa zvifananidzo zvako uye zvinyorwa zveShoko zviri nyore. Ichi chishandiso chakanaka kumabhizimisi uye mabhizinesi. Iwe unogona kukonzera BMP, GIF, JPG uye PNG mafaira uchishandisa chiyi. Iwe unongotarisa dheta uye shandisa bhodhi "Extract" kuti utange kupera. Apo Konwerter inogadzirwa nekukanda, unogona kukodha iyo data mudikanwa rakanaka.
SmallPDF imwe yerudzi rwechifananidzo chekuwedzera. Iine inoshandiswa-user-friendly interface uye inogona kuparadzira semifananidzo yakawanda sezvaunoda. SmallPDF haisi kungotsvaga mapepa eJPG nePNG asi inotsvaga nhamba kubva pamapepa ePDI. Iwe unogona kuwana dhidhiyo muoneki inooneka uye inogona kuchinja uye inogona kuunza zvinotungamirira pane internet. Paunenge uisa URL kana kuisa mufananidzo, unofanira kungotanga pane "Scrape" bhatani uye rega ichi chiiti chiite basa rayo.
PDF Purogiramu ndeimwe yezvinyorwa zvakanakisisa zvekugadzirisa chigadzirwa chemufananidzo. Iyo inokutora iwe mifananidzo yakaisvonaka uye inoparadza nhamba huru yemapeji ewebhu nyore. Chinhu chimwe chete chinokanganisa ndechekuti chigadzirwa ichi chinogona kukwira kusvika kumifananidzo mitatu panguva. Izvi zvinoreva kuti iwe haugoni kuishandisa kwezvirongwa zvakawanda uye unoda kutenga mushandi waro wekutanga. PDF Online haifaniri kuderedzwa uye inokwanisa kutora data yako yekubudisira mabasa paIndaneti. Icho chirongwa chakazara uye chakavimbika, chakakodzera kumabhizimisi, mapurogiramu, coders, nyanzvi dzeIt uye webmasters.
PDFMate zvakare imwe shanduro yakanakisisa yekugadzirwa kwechifananidzo. Iko ikozvino inowanikwa kune vashandisi veWindows bedzi uye inonyatsozivikanwa nokuda kwayo yakashandiswa-yakashandurwa. Ne PDFMate, unogona kutora mifananidzo yakawanda kana mapeji eDVD sezvaunoda. Ichi chishanduko chinotora deta kubva pamapeji mashizha, mapeji machena, misangano yehurukuro uye zvinyorwa zvepaIndaneti. Iyo inoparadza zvose PNG uye JPG mafaira uye yakavimbika software.
Nokuda kwekutsvaga injini yekutsvaga, mifananidzo yose inofanira kunge yakave yakagadzirisa zvinhu zveAlT. Izvo zviito zvinoudza Google pamusoro pezvifananidzo zvako uye unozvipa pfungwa yehupenyu hwehuwandu hwauri kubudisa. Idzi shanduro dzepamusoro dzechigadziro chekugadzirwa kwezvifananidzo zvose zvinotendeseka uye dzakarurama. Vanotipa mhinduro yakadikanwa uye havadi chero kadhi. Iwe unogona kuwana ruzivo kubva kunezvifananidzo zvekuwedzerwa kwepurogiramu semunhu asina kukora.